Las vegas unzip2वर्ष9महिना पहिले #769
नमस्ते, different बिभिन्न पीसीहरू (3.०4.05 जीबी प्याक) मा LV डाउनलोड गर्नुहोस्। Winrar प्रयोग गर्दा यो 6x.tiz फाईलहरू १x.exe फाईल अनप्याक गर्न असफल हुन्छ। प्रत्येक उदाहरणमा भन्नाले अभिलेख भ्रष्ट छ वा अज्ञात फाइल प्रकारहरू समावेश गर्दछ। के अर्को अपराधी बढी सफल हुनेछ? यदि हो भने, कुन एक, कृपया?
Las vegas unzip2वर्ष9महिना पहिले #770
नमस्कार र Rikoooo मा स्वागत छ। तपाईं कृपया यसलाई अन्तर्गत पोष्ट गर्न सक्नुहुन्छ FSX,FSX स्टीम उप-फोरम? यो विशेष विषय Rikoooo फोरम सदस्यहरु को लागी आफ्नो परिचय को लागी हो।
फेरि एक पटक, स्वागत गर्दछौं।
Las vegas unzip2वर्ष9महिना पहिले #772
Las vegas unzip2वर्ष9महिना पहिले #773
मैले प्रभावकारी रुपमा यस मुद्दालाई भेट्टाएको छु, मैले यसलाई Izarc को प्रयोग गरी समाधान गरे:
Izarc फ्रीवेयर डाउनलोड र स्थापना गर्नुहोस् www.izarc.org/ then right click on the archive choose "Izarc" and "Extract to las_vegas_mega_photoreal_scenery"
अब यो काम गर्दछ
म पनि जसो Rikoooo मा एक नयाँ सङ्ग्रह अपलोड गर्दै त्यसैले केहि घण्टा भित्र यो कुनै लागि तय गरिनेछ।
असुविधाको लागि माफ गर्नुहोस्, ठूलो फाईलहरूसँग सम्झौता गर्न सजिलो छैन,
निम्न प्रयोगकर्ता (हरू) धन्यवाद भन्नुभयो: कुकुर
अन्तिम सम्पादन: द्वारा rikoooo.
समय पृष्ठ सिर्जना गर्न: 0.253 सेकेन्ड